Sei kudzorera iPhone mifananidzo? | IPhone nhau
Sei kudzorera iPhone mifananidzo?
Ignatius Room | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Makore mashoma apfuura, apo vashandisi vakatsigira ma terminals, ese ari maviri ekupedzisira-uye ekupedzisira-magumo, kuitira kukwezva huwandu hwakawanda hwevatengi, vashandisi vakatarisana nedambudziko rekuzvarwa mashandiro eanoshanda, mashandisiro ayo aisazombogona kubviswa kubva nyore nzira , kubvira vaida ruzivo rwakawanda.
Neraki, kuSpain nedzimwe nyika zhinji, hatina kuwana dambudziko re bloatware mu iPhone, zvirinani nevechitatu mapato, sezvo Apple ichitipa akateedzana mafomu ekuti vazhinji vedu hatimboshandise uye anogara achiguma mufolda Yaraswa , Hazvibatsiri uye chero zvatinoda kuvadaidza. Dzimwe nguva kubva pane iro folda vanonyangarika sevamwe mafomu atisingakwanise kuwana chero kupi. Kana iri yako kesi, isu tinokuratidza maitiro ekudzosera maikoni uye system maapplication akabviswa kana kuti vakanyangarika.
Iyi dzidziso yakapusa inogona kutiburitsa mumatambudziko kana tikachinja ma icon eiyo iPhone kunyorera uye isu hatizive kudzosera iwo epakutanga iwo.
Nzira yekumberi iri nyore kwazvo:
1 Maitiro ekudzoreredza yakadzimwa iPhone icon
2 Maitiro ekudzoreredza akadzimwa maapplication pane iOS
3 Kana yedu terminal iine jailbreak
Maitiro ekudzoreredza yakadzimwa iPhone icon
Zvichienderana neshanduro yeIOS inowanikwa mune yako terminal, zvinokwanisika kuti sarudzo dzemenyu dzakasiyana neidzo dzinoratidzwa mumufananidzo uyu
Kana mudziyo wedu watanga kumira kuratidza mufananidzo weimwe eemaikoni ehurongwa, kana isu tichida kubvisa zvese zvigadziriso zvatakaita mune yedu terminal tichishandisa iyo jailbreak, tinogona kugara tichishandisa kunyorera kwatakaita, nguva dzose uye paanotipa iyo sarudzo yekudzosera shanduko.
Kana zvisiri, nekuda kwenhamba hombe yesarudzo idzo iOS dzinoita kuti dziwanikwe kwatiri, tinogona kudzoreredza icon yeese maficha atakaisa pane yedu iPhone kana iPad kuburikidza nesystem. Ku dzosa icon rekushandisa isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Dzvanya pa Zvirongwa.
Mukati Zvirongwa, tinya pa General.
Ipapo isu tinodzvanya General tinoenda ku Dzosera.
Pakati pesarudzo dzakasiyana dzinopihwa nemenyu iyi, tinofanirwa kubaya Dzosera chidzitiro chemba.
Kupedzisa maitiro, chigadzirwa chichagadzirisa zvakare kukwanisa kuita shanduko. Kana mudziyo wekumisikidza wapedza, iwo ma icon anga akambovharwa kana asina kuratidzwa zvakananga, anowanikwa zvekare neyakajairika icon.
Mune ino menyu iwe zvakare une zvimwe zvimwe zvekudzoreredza sarudzo izvo hazvina kushata kuziva kuti ivo varipo.
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa maapplication pane iOS
Nokuburitswa kweIOS 12, Apple yakawedzera chinhu chitsva icho inotibvumidza kubvisa ese iwo echinyakare mafomu atisingaronge kushandisaZvichida nekuti ivo havana chinangwa kwatiri kana nekuti isu tinoda kushandisa imwe nzira nemamwe mabasa.
Kunyangwe chinhu chakajairika uye chakajairika kusanganisa mashandisirwo asina basa eiyo system mufaira, kuitira kuti tingava tichida pane imwe nguva, zvingangoita kuti kana nzvimbo yemudziyo wako yagara iri pasi, wafunga kuidzima kubva mudziyo wako, nekuda kweichi chiitiko chakaunzwa naApple.
Patinoenderera kudzima chikumbiro chekuzvarwa, zviri chaizvo isina kudzimwa zvachose kubva pachigadzirwaAsi, yakavanzwa kubva pamaonero emushandisi uye inoderedza saizi yayo kune izvo zvakanaka uye zvinodikanwa. Icho chikonzero ndechekuti ese emuno maApplication ekushandisa, kune akakura kana mashoma, akabatanidzwa nezvinhu zvakasiyana zveiyo system, saka kubvisa application kunogona kukanganisa kugadzikana kwayo.
Kana isu tichida kushandisa zvekare chero epamhando ekushandisa izvo zvatakambodzima, isu tinongofanirwa kudaro enda kuchitoro chekushandisa cheApple uye tsvaga zita rekushandisa. Kunyangwe ichiratidzika kunge yakapusa, zvingangoita kuti vamwe vashandisi havazvione zvakajeka, saka isu tichazozvitsanangura nemuenzaniso unoshanda, kudzima Calculator application.
Kana tangobvisa iyo application, isu tinovhura iyo App Store uye to munda wekutsvaga.
Mundima yekutsvaga, tinonyora zita rekushandisa ratiri kuda kudzorera. Tinofanira kuziva, hongu kana hongu, zita chairo rekushandisa kuti tinoda kudzorerazve.
Mhedzisiro yekutanga iyo inogara ichionekwa zvinoenderana nemaitiro ekutsvaga, mune ino Calculator, nIchakuratidza iyo yemuno application yataive tadzima.
Tine chokwadi sei kuti ichokwadi? Yakapusa kwazvo, nekuti pachinzvimbo chekuratidza Tora, iyo icon yegore inoratidzwa pasi, izvo zvinomiririra kuti takambotenga kana kurodha pasi application pane izvi kana zvimwe zvigadzirwa. Kuti udzore zvakare, isu tinongofanira tinya pane icon yegore nemuseve wezasi.
Mukuwedzera, ne kana tisina chokwadi, tinya pane chishandiso kuti utarise kana mushambadzi wekushandisa iri Apple pachayo. Zita remusiki wekushandisa rinoratidzwa pazasi pezita rekushandisa, mune ino iri Apple.
Kana yedu terminal iine jailbreak
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kuputsika kwejeri kwakaderera mumakore matatu apfuura, nekuti Apple yakateedzera mazhinji ezvimiro zvaive zviripo Kubudikidza nenzira iyi yekuzarura iyo iPhone, vazhinji ndivo vashandisi vanoramba vachishandisa, kuti vanakidzwe nemimwe mitezo isati yavapo uye zvakare ine chimiro chidiki chekuve mune ramangwana.
Imwe yetweaks inoshandiswa nevashandisi vazhinji uye chimwe chezvikonzero chikuru zvekuenderera mberi kwejere, tinoiwana ichikwanisa kugadzirisa zviratidzo zvemashandisirwo esistimu, pamwe nevamwe vatakakwanisa kuisa. Kana iwe uri mumwe werudzi urwu rwevashandisi uye chiratidzo chanyangarika, chinoratidzwa chena kana kuti chanyangarika, saka tinokuratidza sei kudzorera iPhone mifananidzo.
Jailbreak inzira yekuvhiringidza, kubvira inobvumira kupinda kumudzi wesystemNekudaro, idzi mhando dzekushandurwa dzinogona kuitwa, izvo dzimwe nguva zvinogona kukonzera kuti kifaa chedu chitange kuratidza malfunctions
Uku kutadza kushanda dzimwe nguva kunoonekera kana isu taisa tweak iyo isingaenderane neiyo iOS neCydia vhezheni izvo zvatakaisa, saka isu tinofanirwa kungwarira chaizvo kana tichiisa chero chishandiso cherudzi urwu, nekuti chinogona kukanganisa iyo jailbreak yeyedu kifaa.
Iyi dzidziso inogona kuve yakapusa asi hazvibatsire kuziva zvishoma zvishoma nezve dzimwe sarudzo dze iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Sei kudzorera iPhone mifananidzo?
Jose Cantellips akadaro
Ndiri kutsvaga kuti ndinga dhawunirodha sei mascreen saver e3G iPhone 8G kubva papeji remahara nekuti ndinogona kuodhaunirodha kukomputa uye handigone kuendesa kufoni, ndapota, kana mumwe munhu aine ruzivo rwekuzviita, tumira kune yangu e-mail air_jose@yahoo.com nekukurumidza sezvazvinogona nekuti ini ndoda kubaya iphone yangu
Pindura kuna Jose Cantellops
Bartholomew Queteba akadaro
Chinhu ndechekuti, iyo Calculator, kambasi, uye izwi rekodhi zvidhori zvakarasika uye handina kukwanisa kuzvidzorera kuchiratidziro chemumba. Kuti ndivaone ndinodzvanya pabhatani pazasi uye zvese zvinoshandiswa zvinoonekwa uye kubva ipapo ndinozvisarudza pandinozvida. Nenhema iri pamusoro hapana kudzorerwa kunoshanda. Ndatenda
Pindura Bartolome Queteba
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiriwo, chaive nekuda kwekuparara kwejeri here?
Zvakanaka chaizvo zvakandibatsira zvakanyanya
Juan de Lomas de Zamora akadaro
Mhoroi, ndakaita zviri pamusoro, uye zvakashanda, asi ini handiwani chiratidzo chewachi, icho chandinoshandisa kakati wandei semaaramu wachi, ndine Iphon 4 (pamberi peS), ndapota, mumwe munhu andiudze «nzira»
Pindura Juan de Lomas de zamora
Ndarasa iyo SETTINGS icon
Ini handisi kuwana iyo yekuisa icon ... ndinoidzosa sei?
Ndakagadzirisa iphone yangu uye chiratidzo chemwenje chakanyangarika (kushandisa mwenje semwenje kana chimwe chakadai)… Ndinoiwana sei?
LUXURY, NDATENDA. Inoshanda kana uchiisa gridlock yemawadhi pane ios 7.0.4. Pane imwe nguva pandinofunga ini ndaitofanira kudzorera uye neaya akapusa asi anobatsira matanho akagadziriswa.
Yazvino kwazvo akadaro
Yakakura iyo posvo yakandibatsira zvakanyanya
Pindura muy muyactual
Varume, ndakavhura yangu IPhone 4, ndaisa iyo Telefónica chip mairi uye icon yekutaurirana yanyangarika kubva pachiratidziro chepakutanga, sekufunga kwavo, ini ndatevera maitiro ekumisazve chidzitiro chekumba uye hapana chinoitika, unogona kupa imwe neimwe nzira, ini ndakamirira mhinduro yako.
Delete yangu marongero icon, ndinoidzosa sei?
Zvakandishandira Ndatenda rudo
Ini ndakarasa iyo 1Password icon pane iPnone 6 uye ndakaidzosa nekuivhara pasi zvachose uye kuitangazve. Yakaonekwa kwandiri senge nyowani pane yekupedzisira skrini.
Yonle du reset marongero uye ini ndakarasa maikoni ese, ndapota ndibatsireiwo, ndinongowana kusarudza mitauro
Ini ndakadzima iyo whatsapp icon pane yangu iphon 3, uye ini handizive kuti ndoitora sei, ndipe ruoko, chishandiso, ndisina kuve chekupedzisira kuchema, ichiri kushanda mushe.
Pindura kuna suso
George Leon akadaro
Ndingaite sei kuti ndiporese tsamba icon icon iPhone 6 kuwedzera
Pindura Jorge Leon
Iniwo ndakarasa tsamba yemakero, ndakaitsvaga kuburikidza siri siri ndokupinda muaccount yangu asi inotaura kuti yatovepo, handizive kuti ndoigadzirisa sei.
Pindura kuna lusha
Ini nekukanganisa ndakabvisa mumhanzi download icon pane yangu iphone. Ini ndadzoreredza iyo skrini mifananidzo uye haina kubuda, ndingaidzosa sei Kutenda kwazvo.
Ini ndadzima chiyeuchidzo icon, ndingaitora sei? Ndatenda
Ini ndadzima chiyeuchidzo icon uye ndoda kupora
Reyna Divva akadaro
Ndinokutendai zvikuru, ruzivo rwenyu rwakandibatsira kuti nditorezve zvinyorwa zvangu sezvo ndakanga ndadzima app kubva mu iphone yangu.
Pindura Reyna Divva
Jorge Leydan akadaro
Super yakandipa ini ndinokutendai zvikuru !!
Pindura Jorge Leydan
Kudanwa kweDuty Mobile beta inotangisa svondo rinouya
Spotify inopa mudziyo wayo wemotokari, "Car Chinhu"